Mareykanka oo muwaadiniintiisa u jeediyay in ay ka baxaan magaalada Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo muwaadiniintiisa u jeediyay in ay ka baxaan magaalada Muqdisho
November 4, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
[Sawirka: Calanka Mareykanka.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa u jeediyay in ay ka baxaan magaalada Muqdisho, sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya.
“Khataro gaar ah oo jira darteed oo ka dhan ah shaqaalaha Mareykanka ee garoonka caalamiga ah ee Muqdisho, howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya waxa uu u jeediyay shaqaalaha Mareykanka in ay ka tagaan Muqdisho ilaa faahfaahin dheeraad ah,” ayay bayaan ku sheegeen howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya.
“Iyadoo la tixraacayo Digniinta safarka ee Soomaaliya, Waaxda Arrimaha Dibadda waxay sii wadi doontaa inay uga digto muwaadiniinta Mareykanka in ay u safraan Soomaaliya. Xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliya waa mid aad u liidata, khatarna u ah dhamaan muwaadiniinta Mareykanka ee Soomaaliya weli waa kuwo muhiim ah. Waaxda Arrimaha Dibedda ayaa ku boorrisay dhamaan muwaadiniinta Mareykanka ikuwaasoo go’aansaday inay joogaan Soomaaliya in ay dib u eegaan qorsheyaasha amniga ee shakhsiyeed, waana in ay qaadaan talaabooyin ku haboon si kor loogu qaado ammaankaaga shakhsiyeed, ayagoo ka warhaya degaanka, kormeerida warbaahinta maxaliga ah si loo cusbooneysiiyo, loona ilaaliyo feejignaan sare. Ma jirto joogitaan safaaradeed oo Maraykanku ku leeyahay Soomaaliya.” Ayay ku sii dareen.
Tilaabadaan ayaa imaanaysa iyadoo dalka Soomaaliya uu kasoo kabanayo sanado badan oo fowdo iyo ammaandaro ah, masuuliyiinta dowladda Soomaaliya oo taageerada ugu badan ee dhanka ciidanka ka hesha dalka Mareykanka ayaan ka hadlin hadalka kasoo baxay Mareykanka.
August 8, 2017 Dakhtarkii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamed Jaamac Salaad oo geeriyooday
May 18, 2017 Baarlamaanka Puntland oo doonaya in ay horjoogsadaan qorshaha madaxweynaha ee uu ku kordhinayo kuraasta baarlamaanka
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Diyaarad rakaab oo ay lahayd shirkada Ethiopian Airlines ayaa burburtay, waxaana ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo dhan 157 qof. Rakaabka ayaa ka soo jeeday 33 dal oo ay kamidyihiin Kenya, Itoobiya, [...]
Puntland’s vice president vows to liberate Qandala coastal town from ISIS militants
Garowe-(Puntland Mirror) The vice president of Puntland Abdihakim Omar Amay has vowed to liberate Qandala from ISIS militants. “Our armed forces are ready to retake Qandala town from the militants,” Mr Amay told Radio Daljir [...]